घर युरोपियन स्टार डानी सेबललोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
डानी सेबललोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। आर्सेनलTrueFans र लाई क्रेडिट
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले उपनाम "Dani“। हाम्रो डेनी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
डानि सिबेलोस बचपन कहानी - मिति विश्लेषण। लाई क्रेडिट AsEnglish, शस्त्रागार र आईजी
हाम्रो विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा र क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यात कथाको मार्ग, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन आदि शामिल छ।
हो, सबैजनालाई उनको रचनात्मक मिडफिल्ड क्षमताहरूको बारेमा थाहा छ, जसबाट उनले आर्सेनल समर्थकहरूबाट प्रशंसा कमाएका छन्। यद्यपि, केवल केहि थोरै दानी सेबलोसको जीवनी विचार गर्दछन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- बाल्यकाल
सुरूवात गर्दै, उनका पूरा नामहरू डेनियल सेबलोस फर्नाडीज हुन्। डानि सिबालोस जसलाई प्राय जसो बोलाइन्छ एक्सएनयूएमएक्सएक्स अगस्त7मा उनको आमा सलोमी फर्नाडीज र बुबा, एन्टोनियो सेबालोसको स्पेनी नगरपालिका उत्रेरामा जन्म भएको थियो। तल उसको प्यारा आमा-बुबाको फोटो छ।
डानी क्याबेलोस अभिभावक
दानी क्याबेलोस परिवारको उत्पत्ति र जडाहरू दक्षिणी स्पेनको राजधानी सेविलाबाट आएका छन्। तिनीहरू उत्रेराको सानो गाउँका हुन् जसलाई झगडाको गोला मानिन्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उत्रेरा पनि ढिलोको गाउँ हो जोस एंटोनियो रेजेस जुन जून 1st 2019 मा मारिए जब उसको मर्सिडिज ब्राबस S550V उत्तरीरा नजिक A-376 मोटरवेबाट गयो।
डानी सेबललोस परिवार पृष्ठभूमि। DepositPhotos र Espanafascinante मा क्रेडिट।
डानि सिबेलोस आफ्नो बच्चा दिदी सलोमे सेब्लोलोसँग हुर्केकी छिन्। ऊ पहिलो छोराको रूपमा जन्मेको थियो र उसका दुई छोरा र बुबाआमाको छोरा थियो। साथी Spaniard जस्तो छैन Gerard Deulofeu, डानी सानो बच्चाको रूपमा बढी शान्त र संकलित फिगरको थी। तल उसको भित्री केटाको फोटो रहेको छ।
डानी सेबललोस - बढ्दो दिनहरू
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
निद्रा लागेको फुटबल-प्रेम गर्ने गाउँबाट आउँदैछ र ढिलो भइसक्यो जोस एंटोनियो रेजेस आफ्नो मूर्ति को रूप मा, यो केवल स्वाभाविक थियो दानी सेब्लोस सुन्दर खेल संग प्रेम गर्न को लागी।
डेनी सेबललोस, जब उनी7को उमेरमा 2003-04 सिजनसँग मिले जब लेट रेयेस आर्सेनल एफसीको अजेय पक्षको हिस्सा थियो जुन त्यस सत्रमा अजेट रह्यो र प्रीमियर लिग जित्यो।
आर्सेनल अजेयहरू - 49 खेलहरू नाबाद
यस प्रभावकारी उपलब्धिले डानि सेब्लोलोजको रुचि एक फुटबलर बन्न देख्यो। सुरुमा उनले आफ्नो सुरुवात गरे फुटबल फुटबल उसको परिवारको बैठक कोठामा तर पछि उत्रेराको मैदानमा खेल्यो।
यसमा कुनै समय लागेन, डेनिले एक फुटबल बलको साथ सबै प्रकारका सामानहरू प्रतिभाशाली अभिनय बनिनको लागि शीर्ष स्पेनिस क्लबहरूसँग ट्रायलमा भाग लिन प्रेरित गरे। जब उनले ट्रायलमा भाग लिन कल अप गरे सेविला एकेडेमीमा, उसको परिवारका प्रत्येक सदस्यले व्यक्त गरेको खुशीको कुनै सीमा थिएन।
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
डानिले सेभिल्ला एकेडेमीको परीक्षण उडान र inहरूमा पार गरे र 8 को उमेरमा 2004-2005 duringतुमा आर्सेनलको अदृश्य प्रदर्शन भएको केही समय पछि एकेडेमीमा लगियो। धेरै जसो बच्चाहरू जस्तै, यो पनि उनले सेभिला एफसीको टोलीमा सम्मिलित हुन रमाईलो थियो धेरै त्याग गर्नुपर्‍यो जस्तै हराइरहेको जन्मदिन पार्टीहरू वा चीजहरू जुन उनी आफ्नो परिवारको घरतिर हेर्दै थिए।
सानो तानीले तल चित्रमा क्लबको शुरुवातमा प्रभाव पारे किनकि उनले आफ्ना टिमलाई पहिलो ट्रफी जित्न सहयोग गरे।
डानी सेबललोस- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन। आईजी लाई क्रेडिट
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि कथा
एकेडेमीमा, सानो दानीले आफ्नो सपना साकार पार्न कडा दृढ संकल्प राखेका थिए र क्लबको पहिलो टीममा पुग्ने उनको महत्वाकांक्षालाई एक उत्तीर्ण कल्पनाको रूपमा हेरिएन।
त्यहाँ एक समस्या आयोआफ्नो क्यारियर प्रारम्भिक सम्म। POOR डेन क्याबोलोस 2009 मा सेभिला एकेडेमी द्वारा A को कारणले जारी गरिएको थियो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस समस्या.
फेनी कहानी डानी सेबललोस रोड
NOTE: गुगल खोजीका अनुसार क्रोनिक ब्रोन्काइटिस एक प्रकारको हो सीओपीडी (दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुसीय रोग)। डानी सेबलोसको केसमा उसको घाइते र फुलेको ब्रोन्कियल ट्युब्स उनको मुटुको नजिक थियो जसले धेरै श्लेष्म उत्पादन गर्दछ। यस अवस्थाले डानी सेबलोसलाई खोकी खान्थ्यो र सास फेर्न गाह्रो भयो त्यसैले उनीहरुसँग आफ्नो क्यारियर अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुग्नु उनको अकादमी बनायो।
कुनै पनि बच्चा जो आफ्नो क्यारियरको यस चरणमा यस किसिमको रोगबाट गुज्रिरहेको छ, केवल यसले राम्ररी थाहा पाउँदछ जुन कारणले गर्न सक्ने गहिरो भावनात्मक पीडा हो। दानीका आमाबुबाले उनको छोरालाई उनको स्वास्थ्य अवस्था व्यवस्थापन गर्न मद्दत गरे। तिनीहरूले उसलाई आफ्नो परिवारको नजिक रहन अनुमति दिए पहिले उनले आफ्नो क्यारियरमा ब्रेक लिए, त्यसपछि उसलाई युवा फुटबल सीडी उत्रेरा खेल्न जारी राख्दा उपचार प्राप्त गर्दै।
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
2011 वर्षमा ठ्याक्कै वर्ष पछि, डानि सेब्लोस अझ राम्रो भयो। 2011 मा उनीहरूसँग हस्ताक्षर गरे पछि उनले वास्तविक बेटिसमा आफ्नो युवा विकासलाई जारी राख्न निर्णय गरे।
पहिलो टीमको सपनाहरु साकार पार्न दानीसँग अझै पनि कडा संकल्प छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एकेडेमीमा विभिन्न श्रेणीहरु outranking पछि, दानी 22 फेब्रुअरी 2014 मा वास्तविक Betis सँग एक पेशेवर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो अझै एक कनिष्ठ जबकि। क्लबमा उसको मुख्य आकर्षणले उनको टीमलाई सेगुंडा डिभिसियन जित्न मद्दत गरिरहेको थियो ला लीगा2ट्रफी
डानि सिबेलोस आफ्नो रियल बेटिस ट्राफी र पुरस्कार होल्ड गर्दै
ट्रफी जितिसके पछि, डेनिलाई स्पेनिश फुटबलमा परिवर्तन हुन धेरै समय लागेन। ऊ भूतपूर्व रियल म्याड्रिड स्काउट्स बन्न पुग्यो जसले आफ्नो हस्ताक्षरको लागि माग गर्‍यो। ठीक on 14 जुलाई 2017, रियल म्याड्रिडले छ वर्षको सम्झौतामा सेब्लोसको हस्ताक्षर घोषणा गरे।
सुरुमा, क्लबमा उहाँसँग सबै कुरा ठीकठाक भयो। तर उनको क्यारियर को एक कठिन पल आयो जब Zidane को लागी उहाँलाई त्याग्ने निर्णय गरे मोडरिक र Kroos। दानीको लागि सबैभन्दा निराशाजनक पल आयो जब Zidane एक को लागी उसलाई प्रयोग अविश्वासle 28 सेकेन्ड लेगनेस बिरूद्ध खेल को, एक कार्य जसले गरिब दानी बनायो (तल चित्रमा) उसको खेल खेल्नको लागि अरू कतै भेट्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यो।
खेलमा 28 सेकेन्डको लागि प्रयोग गरिसकेपछि डानी सेब्लोस पिच छोड्दै
स्वर्गीय जोस एन्टोनियो रेसको बुवासँग परामर्श गर्दै: बताए अनुसार, क्लबसँग उसको भविष्यको सम्बन्धमा डानि सेब्लोसको लागि गहन छलफलको एक क्षण आयो। उनले एकचोटि उनले बुबाको कुरा गर्ने खुलासा गरे लेट जोस एन्टोनियो रेसले तल उसको शब्दहरूमा;
'मैले आर्सेनलमा आउनु भन्दा पहिले उनका बुबासँग कुरा गरें र उनले मलाई दुईपटक सोच्न भनेन किनभने आर्सेनल एक अद्भुत क्लब हो र यस कुरामा जोड दिँदै कि उनका दिवंगत छोरा जोसे यहाँ अत्यन्त रमाइलो थिए।'
25 जुलाई 2019 मा हेर्नुहोस्, यो घोषणा गरियो कि डानि सेब्लोस एक alतु लामो loanण सम्झौतामा आर्सेनलमा सामेल भए र पहिले खाली गरिएको आठ नम्बरको शर्ट हस्तान्तरण गरियो हारून रस्सी.
डानी सेब्लोलो आर्सेनलमा सम्मिलित हुँदै। क्रेडिट स्वतन्त्र
डेनि सेब्लोसलाई एक भावनात्मक क्षण आयो जब जब उनी प्रशिक्षण मैदानमा जान्छन् ढिला जोस एन्टोनियो रेजको फोटो देखे। यसले उसलाई क्लबलाई उनीहरूको मध्य-क्षेत्रको चमक पुनः प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… आर्सेनलको लागि दानीको पहिलो सुरूवात उनको दुई सहयोगी प्रदान गर्ने र म्यान अफ द म्याच पुरस्कार जितेर समाप्त भयो।
क्लबको साथ पहिलो खेलमा डानि सेब्लोस म्यान अफ द म्याच अवार्ड विजेता। क्रेडिट ब्रान्ड
आर्सेनल प्रशंसकहरूले दावी गरे कि उनको खेलको शैलीले पहिलो खेलमा रोल्स रॉयसको शानलाई मस्टang्गको इञ्जिनसँग जोडेको थियो। लेख्ने समयमा, डानि सेब्लोसलाई उत्तर लन्डन क्लबमा खेलाउन आएका अचम्मका आक्रमण गर्ने मिडफिल्डर्सको अन्तहीन उत्पादन लाइनमध्ये एकको रूपमा देखिन्छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
तपाईंलाई थाँहा थियो?… आर्सेनल प्रशंसकहरूले त्यस क्षणको लागि प्रतिक्षा गरिरहेका थिए डानी सेब्लोसलाई पिचमा स्वागत गर्न। तर त्यो महत्वपूर्ण थियो लन्डनको सुन्दर शहरमा डानी सेबलोस गर्लफ्रेंड मारिया सान्चेज डेल मोरललाई स्वागत गर्नु।
तल चित्रण गरिएको मारिया सान्चेज डेल मोरल लिखित समयमा 24 वर्ष पुरानो हो। यस उमेर निहितार्थको मतलब ऊ आफ्नो प्रेमी भन्दा एक वर्ष जेठो छ। कसलाई मतलब!!… उमेर उनीहरूले भन्छन् कि केवल एक संख्या हो।
मारिया सान्चेज डेल मोराललाई भेट्नुहोस्- दानी सेबेलोस जीवनको प्रेम। आईजी लाई क्रेडिट
मारिया सेभिलकी हुन्, उही मान्छेसँग उही गृहनगर। तेजस्वी WAG लन्डन मा उनको प्रेमी संग मिल्नु अघि म्याड्रिड मा एक किंडरगार्टन स्कूल मा एक शिक्षक को रूप मा काम गर्थे। यस अनुसार सूर्य, वास्तवमै शिक्षण उनको परिवारको रगतमा छ किनकि उनको आमाले स्कूलमा छँदा उसलाई सिकाउनुभएको थियो। शिक्षकको रूपमा उनको आम्दानी पूरक हुन, डेल मोरलले पनि आंशिक कामको रूपमा मोडेलिंग गरेकी थिइन।
दुबै प्रेम चराहरु डानी सेबलोस र उसकी प्रेमिका मारिया 2016 देखि डेटि began गर्न थाले, जुन उनले रियल बेटिस को लागी आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर जीवन शुरू। उनीहरूको नाटक मुक्त सम्बन्धले पूरा कुरा साँचो प्रेममा रूपान्तरित हुनु अघि डानि सिबेलसलाई मारियाको लागि सबैभन्दा राम्रो मित्रको रूपमा शुरू गरेको देख्यो।
डानी सेब्लोलोस र मारिया सान्चेज डेल मोरल। आईजी लाई क्रेडिट
दानी उनको र उनको प्रेमिकाको फोटोको साथ 1.6 मिलियन भन्दा बढी अनुयायीहरूलाई इन्स्टाग्राममा मनोरन्जन गर्दछन्। उसले एक पटक उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा एक सिजलि .्ग फोटो साझा गरे जहाँ उनी आफ्नी प्रेमिकाको साथ न्यानो पोखरी ब्याटमा मजा लिन पूर्ण रूपमा सहज देखिन्थ्यो।
सेबालोलोस आफ्नो प्रेमिकासँग क्वालिटी समय बिताउन मन पराउँछन्
दुबै प्रेमीहरू तल देखिएको तरिकाबाट हेरेर, यो समयको कुरा मात्र हो कि दुबैले उनीहरूको विवाह वा विवाहको लागि अग्रसर कदम चाल्ने निर्णय गरे।
डानि सिब्लोलोज - आफ्ना भावनाहरुलाई कुरा गरौं। आईजी लाई क्रेडिट
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
डानि सिब्लोलोजलाई चिन्न पीच बाहिरको व्यक्तिगत जीवन विवरणहरूले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। हामी भन्छौं कि प्रश्न संग शुरू; कुन कुराले डानी सेबेलोसलाई टिक बनाउँछ?
के ले डानी सेबेलोसलाई टिक बनाउँछ। आईजी लाई क्रेडिट
फुटबल पिचबाट टाढा, डानि सेब्लोस नाटकीय, रचनात्मक, आत्म-विश्वास, प्रभावशाली र प्रतिरोध गर्न अत्यन्त गाह्रो छ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जुन जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उनी आफूले चाहेको केही पनि हासिल गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। एक उदाहरण उसको सडकमा देखीन्छ र ख्याति कथाहरूको लागि उठ्दछ।
उनले पिचमा उपलब्ध गराएको सहयोगहरूको आधारमा, डानि त्यस्तो व्यक्ति हो जसले मानिसहरूलाई साझा साझा कारणतर्फ डो leading्याउन सक्षम हुन्छ। विजय। अन्तमा, उनीसँग स्वास्थ्यको अनुभूति छ जसले अन्य व्यक्तिसँगको सहकार्यलाई अझ सजिलो बनाउँदछ।
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
डानि सेब्लोसको ठूलो परिवार छ र तिनीहरू सबै सिभिलियनहरू हुन्। उहाँ राम्रो र नराम्रो समयमा आफ्नो पुर्खा र जरामा गर्व गर्नुहुन्छ। सबै परिवारका सदस्यहरू; उसका आमा, बुबा, भाई, बहिनी, काका, काका, भतिजा भान्जी आदि) मा चित्रित छन् आफ्नो प्रियजनहरु लाई रक्षा गर्न केहि गर्न तयार छन्।
डानि सेब्लोस परिवारको सदस्यहरूसँग उनको जन्मदिन मनाउँदै। आईजी लाई क्रेडिट
प्रख्यात कथाको लागि उनको गाह्रो बाटोबाट न्याय गर्दै, तपाईंले अवलोकन गर्नुहुनेछ कि डेनि सेब्लोस परिवारका सदस्यहरू, विशेष गरी उनका आमाबाबु उहाँ (सीओपीडी) क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी रोगबाट ग्रस्त भएको बेला उहाँसँगै उभिएका थिए। उसको बुबाआमाको पेशाको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात छ, तर एउटा कुरा हामी पक्का छौं कि त्यो उहाँकै उत्कृष्ट प्रशंसकहरू हुन्। अब हामी तपाइँलाई डेनि सेबलोस बहिनी, उनको नम्बर 1 प्रशंसकसँग परिचय गराउँदछौं।
दानी सेबेलोस बहिनीको बारेमा: डेनी सेब्लोलोसको बहिनी सामोललाई भेट्नुहोस् जसले आफ्नी आमासँग समान नाम राख्छिन्।
सलोमे सेबलोस - डानि सेबेलोस बहिनीलाई भेट्नुहोस्। क्रेडिट Elespanol
सामोल सेब्लोलोस सोशल नेटवर्कको एक धेरै सक्रिय उपयोगकर्ता र उनको भाइ दानीको विश्वासी अनुयायी हो। तिनीहरूका आमाबाबुजस्तै उनी पनि भर्खरै बितिसके पनि उनको बिरूद्ध आलोचनाको बिरूद्ध बचाउन हिचकिचाएनन् प्रशंसकहरूले उनलाई मैड्रिडका लागि रियल बेटिस छोडेकोमा आलोचना गरेका थिए। एक पटक, उनको भाइको आलोचनाको क्रममा सलोमीको सन्देश स्पष्ट पूर्वनिर्धारित थियो। उनले एक पटक भने;
“भाई, तपाईं त्याग र विजयको उदाहरण हुनुहुन्छ, तपाईंसँग यो सबै छ। तपाईं एक च्याम्पियन हुनुहुन्छ। तपाईं लडाई, तपाईं चिच्याई, तपाईं चलाउन ... तपाईं मुस्कान संग यो सबै गर्नुहुन्छ। म तपाईको फुटबलको साथ सँधै समर्थन गर्छु, मँ भन्छु कि तपाई जादुई हुनुहुन्छ, कि तपाई बाँकी भन्दा फरक हुनुहुन्छ। "
दानी सबैभन्दा ठूलो फ्यान हुनु उनको दिन काम मात्र हो। तल उनको भाइको साथ चित्रित सलोम पनि एक ब्यूटीशियन हुन् जसले मानिसहरूलाई सौन्दर्य उपचार दिईन्।
डानि सेब्लोलोज र उनको बहिनी सलोम सेबेलोस। उनी मुटु र पेशेबाट ब्यूटीशियन हुन्। क्रेडिट Elespanol
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- जीवन शैली
व्यावहारिकता र केवल रमाइलोको बीचमा निर्णय गर्नु वर्तमानमा डानी सेबलोसको लागि गाह्रो विकल्प होईन। लेखन को समय मा, लाखौं पाउन्ड मा धेरै पैसा आफ्नो नाम एक पेशेवर फुटबलर को रूप मा आफ्नो छनौट पेशा को लागी धन्यवाद मूल्य छ।
डानि सिब्लोस, लेखनको समयमा वर्तमान समयमा एक भव्य जीवनशैलीमा जीएको छैन जुन तल अवलोकन गरिएको राम्रो विदेशी कारहरूको एक हड्तालले सजिलै देख्न सक्दछ।
डानी सेबललोस लाइफ स्टाइल तथ्यहरू
डानि सिब्लोलोसबाट के देखिन्छ जुन उसको फुटबल पैसाहरू प्रबन्ध गर्न र वर्षाको दिनको लागि केही बचत गर्नमा धेरै समस्या हुँदैन।
डानी सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो को लागी खराब समाचार को एक टुक्रा भयो Mesut Ozil जब रियल म्याड्रिड जवान Arsण मा आर्सेनल सामेल भयो।
मेसेत ओजिल डानि सेब्लोलोजको आगमनले डराए। क्रेडिट व्यक्त र यूट्यूब
त्यो खराब संकेत उचित छ किनकि Ozil आर्सेनलको साथ उसको भविष्यको बारेमा बकबक अनुमानको विषय भएको छ। उत्तर लन्डनमा निराशाजनक 2018 / 2019 सिजन पछि उनलाई आर्सेनल धेरै पटक छोड्न सल्लाह दिइयो। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा क्लबले क्वेस्ट भनेको w 350,000- प्रति हप्ताको साथ सबैभन्दा धेरै तलब पाल्ने खेलाडीको रूपमा आफ्नो ज्याला अफलोड गर्ने हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… धेरै आर्सेनल प्रशंसकहरूलाई थाहा छैन कि डानि सेब्लोससँग उसको नाममा राम्रो संख्यामा व्यक्ति र क्लब हनर्स छन्। तल उसको विकिपीडिया पृष्ठबाट लेख्ने समयमा झिकिएको छ।
डानि सिबेलोस अनटोल्ड सम्मान र पुरस्कार। विकिपेडियामा क्रेडिट।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डेनि सेबलोस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।